Mhlawumbi, intombazana enye ubuncinane ebomini yakuva igama likaCharles Lewis Tiffany, igama laloo ndoda laphantse libe yinto echazwe ngokuba yinto yokunethezeka kunye nesitayela esihle. Indlu yekhadi lebhizinisi likaTiffany libe yinto eqoqayo yokuqokelela iigrafu, abamele bayo basengumqondiso wendlela entle kunye nesimo esiphezulu kubanikazi babo. Kwaye ndibulela kwifilimu eyaziwayo yelizwe langaphandle "Isidlo sakusasa eTiffany" wonke umntu unengcamango malunga nalo mqondiso. Ukuba ufuna i-original, ngokungafani neminye imitshato, ngoko isitayela se "Tiffany" kukuthi. Nangona kunjalo, kuyimfuneko ukucinga yonke into ngokubhekiselele kwingcaciso encinci, zonke iinkcukacha mazigcinwe ngendlela efanayo.
Ukulungiswa kwegumbi kunye nokuseta kwetafile
Okokuqala, kufuneka uqaphele ukuqasha igumbi, ukuba akukho ithuba lokulungiselela ukubhiyozela kwindalo. Ngokukhethekileyo, ukuba yindawo encinci, enobuchule obuhle kunye nezibuko ezinkulu kwiifowuni ezinkulu kunye nefenitshala yesitayela. Akufanele sikhohlwe malunga neskimu sombala: imibala yale ndlela: eluhlaza okwesibhakabhaka, emhlophe, emnyama okanye emnyama - umthunzi omnandi wecokoleti.
Ukukhonza ietafile kuya kulungele ukusebenzisa i-silverware, iiflethi ezimhlophe, iiglasi ze-crystal zifanele zivisisane nomkhanda, osekhulile ngendlela efanayo, ungasebenzisa iirekhodi ze-vinyl ukuhombisa, nokuba ubukho bombethe bhakabhaka buya kuba bukhulu. Isisombululo esipheleleyo kukuba kulandelelwe izihlalo zemibala efanayo yombala obomvu, eboshwe ngeetrbhoni ze-satin.
Ngokuphathelele iziphuzo, i-spinki yepinki ifanelekile, imilenze yeglasi ingakhenkcezwa ngeetrbhoni ze-blue satin. Akuyi kuba yinto enqwenelekayo yokuba ne-ts'oletele emhlophe njengamajuba, iirasi kunye neentliziyo kwietafile.
Ngokuphathelele ikhowudi yokugqoka ekhethekileyo kufuneka icaciswe kusengaphambili kwiimemo, ezithi, ngokulandelelana, mazihambelane nesitayela somcimbi. Ngokomzekelo, isimemo ngendlela yesigubungelo kwi-diski ye-vinyl kuya kulungeleka.
Ngokubhekiselele kwiingubo zeendwendwe - abafazi kufuneka bahambelane nesitayela se-Retro sama-60s: iingubo ezifakwe kulo mfanekiso zikhethiweyo kumbala ohlaza okomvu okanye emnyama, ukudibanisa okuthe ngqo kumfanekiso kuya kuba yimiba yeeparele, iiglavu ze-satin kunye neengubo ezininzi-brim, izicathulo ezindala kunye ne-stilettos, kakuhle libale malunga nekhanda le-Retro. Kubantu, isisombululo esihle kunazo zonke i-tuxedo emnyama kunye nefly butterfly.
Ukuba umtshakazi ukhetha ubuncinane ekukhetheni ingubo, oku kuya kubonisa ngokucacileyo i-stylistics yomcimbi: iingubo ezimfutshane, ezidibanisene neigesi ze-satin kunye nezicathulo eziphezulu ezikhethiweyo. I-styles "iyaboleka" kwi-Audrey Hepburn, le ntonga ephakamileyo, apho idilesi ifakwe khona. Unokuyihobisa intloko ngeentsimbi zeenwele kunye neengqungquthela ezinkulu, umkhoxo okanye "intambo ye-diamond" iya kulungele entanyeni. Ukwenza i-classic, iyakudla ngokukhawuleza iya kuba yimicibisholo ye-retro emnyama.
Umfanekiselo womyeni kufuneka ube ngumzekelo wesitayela kunye nobuhle, i-tailcoat okanye i-tuxedo ayikwazi ukulungele kangcono kule meko. Ukuze uvelise umkhwa othile kumfanekiso womyeni, ungafaka i-blue blue kwi-buttonhole.
Kubaluleke kakhulu ukuba umphathi wesigqeba uqonde umsebenzi obelwe wona. Kukho isidingo sokuphula intloko yakho ukuze ungaphutheli imbono ephambili yokubhiyozela kwaye uhambelane nomoya welo xesha. Ukukhethwa komculo kubaluleke kakhulu, iingoma ngendlela ye-boogie-woogie, rock'n'roll kunye ne-jazz zingasetyenziswa ngokunjalo, oku kuza kubeka iindwendwe kwi-mood of play. Ukhuphiswano kunye nemidlalo kungabanjwa ngqo kumgangatho wokudanisa, ngelixa abanye banokuxhasa abachaphazelekayo.
Zonke iimoto mazibe zimnyama, kwaye njengemihlobiso, sebenzisa iinkcukacha ngemibala eluhlaza okomvu nomhlophe, kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba kwisitayela se "Tiffany" banqamle ngokunethezeka kunye nokuncinci, ngoko ukulungiswa kwemoto kubalulekile ukuba ungadluli iinkcukacha.
Isaladi kunye neidiliya kunye nenkukhu
I-pastry ye-Puff kunye ne-tomato kunye ne-basil
Kutheni kukho ukukhulelwa okubanzi?
Izifo zeentlanzi ze-aquarium
Isibheno se-Classic "Tapenade"
Ukuhamba komoya ngexesha lokukhulelwa
Iyiphi iholide leveki ngoFebruwari 15? Ukunikezwa kweNkosi: amasiko, izithethe, iimpawu
I-mulberry powdery, izilwanyana zamandulo
Ukuzilungiselela njani ukutya